Street Photography အတွက် Leica M 240 ကိုရောင်းပြီး Fuji X100T ကိုဝယ်ယူဖြစ်ခဲ့ အကြောင်းပြချက် ၁၀ ချက် – Digital Photography Myanmar
HomeCameras and EquipmentStreet Photography အတွက် Leica M 240 ကိုရောင်းပြီး Fuji X100T ကိုဝယ်ယူဖြစ်ခဲ့ အကြောင်းပြချက် ၁၀ ချက်
February 11, 2017 Jedi Cameras and Equipment 0
ကင်မရာအသစ်တွေမကြာခဏပေါ်ထွက်လာကြပေမယ့် Leica M240 ကို ကျွန်တော်ဝယ်ယူမိခဲ့ချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်အတွက် သိပ်ပြီးအသုံးဝင်တဲ့ လက်စွဲတော်ကင်မရာတစ်လုံးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အလွန်ကိုပဲလှပသေသပ်စွာတည်ဆောက်ထားတဲ့ကင်မရာမှာ နာမည်ကျော်မှန်ဘီလူးတပ်ဆင်ထားခဲ့လို့ Leica M240 နဲ့ပုံကောင်းတွေရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သို့အတွက်ကြောင့် M240 ကိုရောင်းပြီး Fujifilm X100T ကိုဝယ်ယူတော့မယ့်အချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ street photography လောက က မိတ်ဆွေတွေက တားဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအလှည့်အပြောင်းအတွက် တကယ့်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ အကြောင်းပြချက်တစ်ချို့နောက်ကွယ်မှာ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဘာအကြောင်းပြချက်တွေလဲဆိုတာ အောက်မှာ ဆက်လက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
ဈေးအလွန်ကြီးတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ ူLeica M 240 ကို အသုံးပြုပြီး ကျွန်တော် ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ 35mm f/2 Summicron မှန်ဘီလူးနဲ့အတူ ကောင်းမွန်သေသပ်စွာထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ကင်မရာလေးက အသက်ရှူရပ်လောက်စေတဲ့ ရလဒ်ကောင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ Leica ကင်မရာကို အသုံးပြုရတာ အလွန်အဆင်ပြေခဲ့တယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကို အထင်မမှားကြပါနဲ့။ Fuji X100t ကင်မရာကို သေချာသတိထားမိတဲ့အချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်အတွက် အလွန်ရေးပါတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ ဒီကင်မရာလေးမှာ ရှိနေပါလားဆိုတာ သိရှိသွားခဲ့ပါတယ်။
၂ နှစ်နီးပါးလောက် ဈေးကြီးတဲ့ Leica M240 နဲ့ လက်တွဲလာခဲ့အပြီးမှာတော့ Leica M240 ကိုပြန်လည် ရောင်းချခဲ့ပြီး ဈေးအလွန်သက်သာတဲ့ (Leica နဲ့ယှဉ်ရင်) Fuji X100T ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့ကို ရူးနေလားလို့ တောင် မေးနိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါပြီး ကျွန်တော့ရဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေကို ကြည့်လိုက်ပါဦး။
ကျွန်တော့ရဲ့ X100T ပိုင်ဆိုင်လာမှုက ကျွန်တော့်အမြင်တွေကို ဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်
StreetShootr ဝက်ဘ်ဆိုက် မှာ Fuji X100T အကြောင်း review ရေးသားချိန်မှာတော့ ဒီကင်မရာကို street photography အတွက် တကယ်ပဲ အသုံးတဲ့ကင်မရာတစ်လုံးအဖြစ် ကျွန်တော် လပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့ပြီး မှ ရေးသားခဲ့တာပါ။ ဒီကင်မရာသေးသေးလေးရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က ကျွန်တော့် ကို မင်သက်စေခဲ့ပါတယ်။ Lightroom လိုမျိုး Software တစ်ခုခုနဲ့ ပြန်လည်ပြင်ဆင်စရာမလိုလောက်အောင် ကောင်းမွန်တဲ့ အရည်အသွေးပြည့် ဓာတ်ပုံတွေကို ရရှိနိုင်အောင် သို့မဟုတ် ဒီထက်တောင် ပိုအောင် ဒီကင်မရာအသေးလေးက စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပုံရိပ်တွေက Leica နဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံတွေထက်များကောင်းလို့လား? မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် X100T က သူ့ရဲ့ရှိတဲ့ ပမာဏနဲ့ ယှဉ်ရင် အကောင်းဆုံးအပြည့်စုံဆုံးဆိုတဲ့ ပုံရိပ်အရည်အသွေးကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်လို့ပါပဲ။
ကျွန်တော်အချိန်တော်တော်များများ Fuji X100T ကိုအသုံးပြုလေလေ ကျွန်တော်နဲ့ ကင်မရာအကြားမှာ ထူးခြားတဲ့ ဆက်နွယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာလေလေဆိုတာ သတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ Leica နဲ့ ယှဉ်ပြီး Fuji ကိုကျွန်တော် review တွေလုပ်ရင်း တဝက်လောက်မှာ သတိထားမိခဲ့တာက ကျွန်တော် Leica ကို မထိခဲ့တာ ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့ပြီဆိုတာပါပဲ။ အဲဒီအတွက်တွေကြောင့် X100T ကို Leica ထက်စာရင်ပိုမြတ်နိုးလာခဲ့ပြီး Leica ကိုရောင်းပြစ်ရခဲ့တဲ့အခြေအနေထိရောက်လာခဲ့ပြီး ခုချိန်မှာ Leica ကို ပြန်ယူမလားလို့မေးရင်တော့ လုံးဝပါပဲလို့ ပြောနိုင်နေပါပြီ။
ကျွန်တော့်ကိုအထင်မလွဲပါနဲ့ဦး။ ဒီကင်မရာနှစ်လုံးက လုံးဝကို တူညီတယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ Leica ကင်မရာက အကောင်းဆုံးလို့ပြောရမယ့် ဖန်တီးမှုတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားပြီး Manual focus မှန်ဘီလူးနဲ့ပါ။ တကယ့်ကို သီးသန့်ခွဲထွက်နေတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာတွေအတွက်ပဲ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ ကင်မရာလို့လဲ ပြောလို့ရပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အချို့သော အသေးအမွှား ချိန်ညှိမှုတွေကို X100T မှာပြင်ဆင်ပြီးချိန်မှာတော့ ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာမဆို အကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကို ဖန်တီးလို့ရနိုင်တာကို သတိထားမိခဲ့ပါတယ်။
Manual Focus စနစ်က တကယ်တော့ အရမ်းကြီး အဆင်မပြေဘူး
Fuji X100TLeica M240 နဲ့ 35mm f/2 Summicron မှန်ဘီလူးအတွဲဆိုတာ တကယ်တော့ Manual စနစ်နဲ့ Manual focus စနစ်ဆိုတာ ကျွန်တော့်အကြိုက်ဆုံး စနစ်တွေပါပဲ။ သို့ပေမယ့် ယနေ့ခေတ်က Autofocus ခေတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဘာလို့များကျွန်တော်က manual focus ကင်မရာကို တကယ်ပဲ စွဲလန်းနေဦးမှာလဲ? မြန်ဆန်လို့လား?
Leica ရဲ့မှန်ဘီလူးတွေမှာ သေးငယ်တဲ့ focusing tab ကို focus ring မှာ တပ်ဆင်ထားခဲ့ပြီး အဲဒီအရာလေးက သင့်မှန်ဘီလူးက focus မိနေလား မမိဘူးလားဆိုတာ ကင်မရာကနေ ချောင်းမကြည့်ဘဲ သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီမှန်ဘီလူးကို အသုံးပြုတုန်းကဆိုရင် Hyperfocal အကွာအဝေး ၁၂ ပေလောက်ကို f/8 ထားပြီး လမ်းပေါ်မှာ ရိုက်ကူးခဲ့တာများပါတယ်။ တခါတရံ စိတ်ဝင်စားမိလို့ အချို့အရာတွေကို အနီးကပ်ရိုက်ဖို့ပေါ်လာရင်တော့ focus ကို ၄ ပေအကွာအထိပြောင်းပြီး ရိုက်ကူးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါက ဘာကို ဆိုလိုတာလည်းဆိုတော့ focus ကို အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ထားပြီးရိုက်ကူးတဲ့အတွက် auto focus စနစ်ထက် အများကြီး လျင်မြန်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် X100T က autofocus ကင်မရာပါ။ Manual focus နဲ့ရိုက်လို့ရပေမယ့် ဝါယာစနစ်နဲ့သွားတာဖြစ်လို့ ယေဘုယျအားဖြင့် ရှုပ်ထွေးပြီး တုန့်ပြန်မှုက နှေးကွေးပါတယ်။ ထို့အတွက် ကင်မရာကို Manual Focus စနစ်ကိအရင်ပြောင်းပြီး back button နဲ့ auto focus ကို ပြောင်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ hyperfocal အကွာအဝေးကို နေရာမရွေးအချိန်မရွေး လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ်။ အနီးကပ်ရိုက်ဖို့လိုလာရင်လည်း back button autofocus ကိုပြန်အသုံးပြုပြီး focus လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီနည်းစနစ်ကို ကျွန်တော်လေ့လာပြီး ရိုက်ကူးကြည့်ချိန်မှာတော့ Leica လောက် မမြန်ဘူးဆိုတာတော့ ဝန်ခံပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း X100T ကိုအသုံးပြုတဲ့အတွက် ပုံကောင်းတွေတစ်ပုံမှ ကျွန်တော်မလွတ်သွားခဲ့ဖူးပါဘူး။
X100T ရဲ့ အရွယ်အစားက ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အသင့်တော်ဆုံးပါ
Leica M240 က အရွယ်အစားကြီးမားပြီး တင့်ကားနဲ့တူပါတယ်။ လေးလဲ လေးလံပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် M240 က full frame အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး X100T က APS-C အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက် ကင်မရာနှစ်လုံးယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါ အရွယ်အစားကွာခြားမှုကြီးမားတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
Street Photography ရိုက်မယ်ဆိုရင် X100T ရဲ့အရွယ်အစားကအကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ အိမ်က ထွက်ပြီး ဓာတ်ပုံ ရိုက်ချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ ကင်မရာ လည်ပင်းဆွဲပြီး ထွက်သွားလိုက်ရုံပါပဲ။ M 240 ကို နှစ်အနည်းငယ်လွယ်ပြီး တဲ့နောက်မှာတော့ X100T က ပိုပြီး သုံးပျော်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် ပြောနိုင်ပါတယ်။ လွယ်ထားမှန်းတောင် သိပ်မသိသာလို့ ထုတ်ပြီးရိုက်မယ်ဆိုမှ သတိထားမိပါတယ်။
သေးငယ်တဲ့ အရွယ်အစားနဲ့ အလေးချိန်က ဒီနေရာမှာ အောင်နိုင်သူတွေဖြစ်သွားပါတယ်။
Leica လိုကင်မရာ တံဆိပ်မျိုး လူတော်တော်များများက သိတဲ့အတွက် ဒေါ်လာ တစ်သောင်းတန်လောက်ကို သင့်လည်ပင်းမှာ ဆွဲ သွားတာမျိုးဆိုတဲ့အလုပ်က သင့်ကို ပူပန်မှုပေးစေနိုင်ပါတယ်။ အခိုးခံရရင် သို့မဟုတ် ချော်လဲပြီး ကင်မရာကျကွဲသွားရင် စသဖြင့်ပေါ့။ ထို့အတွက် ကျွန်တော် Leica ကင်မရာအသုံးပြုတုန်းက ဒီကင်မရာသီးသန့်အတွက်ပဲ အာမခံကြေး တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ ၄၀၀ လောက် သုံးစွဲခဲ့ရပါတယ်။
Fuji X100T လိုမျိုး ကင်မရာအသေးလေးတွေကျတော့ သိပ်ပြီးလူတွေရဲ့ အာရုံကို မဆွဲဆောင်နိုင်သလို ခိုးခံရတာ ပျက်စီးသွားတာမျိုးဖြစ်ရင်တောင် သင့်အတွက် ကမ္ဘာပျက်တာမျိုးမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ ဒေါ်လာ ၁၀၉၉ ဆိုတာ သိပ်ပြီး သက်သာတယ်လို့ မဆိုလိုပေမယ့် Leica ရဲ့ ဈေးနဲ့ဆို အလွန်ပဲ ကွာခြားနေပါသေးတယ်။ လမ်းပေါ်ကျွန်တော်ထွက်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ချိန်မှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ကလွဲလို့ တခြားဟာ ပူပန်တာမျိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတာ အမှန်အကန်ပါပဲ။
Fuji X100T (တခြား Fuji X100 ကင်မရာများလည်းအတူတူပါပဲ) တိတ်ဆိတ်အသံထွက်ညင်သာတဲ့ leaf shutter အသုံးပြုထားလို့ တိတ်တဆိတ်နဲ့ ရိုက်ကူးလို့ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် street photography အတွက် လူကြားထဲမှာ ရိုက်ကူးတဲ့အခါ ကင်မရာ ရှပ်တာအသံကြောင့် လူအများ ရိပ်မိသွားမှာ မပူရပါဘူး။ အချို့သော X100 စီးရီးအသုံးပြုတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာအချို့ က electronic shutter အသံအတုကို ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ ဖွင့်ထားပြီး သူတို့ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တာကို သတိထားမိအောင် လုပ်လေ့ရှိတာ ကျွန်တော်သိပါတယ်။
ကျွန်တော့် တစ်ကိုယ်တည်းအမြင်ကတော့ ဒီလိုမျိုး အသံတု ထုတ်တာမျိုးကို မနှစ်သက်သလို အသံသိပ်မထွက်ပေမယ့် ရှပ်တာခလုတ်ကို နှိပ်မိသွားပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ခံစားသိရှိနိုင်တာမို့လို့ ကျွန်တော့်အတွက် ဒီအသံမထွက်တဲ့ အရာက ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ တိတ်ဆိတ်စွာ ဓာတ်ပုံရိုက်ရတဲ့ အပြင် ဒီအသံကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အနှောက်အယှက်မပေးလို့ အသံမထွက်တာကို ပိုတောင် နှစ်သက်ပါသေးတယ်။
Flash ကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်
X100T ရဲ့ကိုယ်ထည်မှာ ပူးတွဲ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ဖလက်ရှ်ကြောင့် street photography အများစုမှာ လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပိုကြီးတဲ့ ဖလက်ရှ်လိုအပ်လာခဲ့ရင်ရော? X100T မှာ ကင်မရာ ဖလက်ရှ်တွေကို trigger လုပ်နိုင်တဲ့ commander mode ပါဝင်ပြီး off camera flash ကို slave mode အဖြစ် ထားလို့ရပါတယ်။ Flash နဲ့ အသုံးပြုပြီး ရိုက်မယ်ဆိုရင်တောင် thumb grip ကို ဖြုတ်ပစ်ဖို့ မလိုအပ်ဘူးဆိုတာ အဲဒီနေရာမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
M 240 မှာလည်း ဖလက်ရှ် တပ်ဆင်လို့ရပါတယ်။ သို့ပေမယ့် X100T ကိုယ်ထည်မှာ ပူူးတွဲတပ်ဆင်ထားတဲ့ ်flash က အကောင်းဆုံးမဖြစ်တောင်မှ ဖလက်ရှ်ကြီး သယ်သွားရတဲ့ ဒုက္ခကို ဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်စေပါတယ်။
Shutter Speed ဘယ်လောက်ဖြစ်ဖြစ် Flash ကို Sync လုပ်ခြင်း
Flash အသုံးပြုရတဲ့ street photography အကြောင်းပြောရရင် X100T ရဲ့ leaf ရှပ်တာ စနစ်ဆိုတာ သင့်ကင်မရာရဲ့ ဘယ် ရှပ်တာအမြန်နှုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် စည်းချက်ညီ လှုပ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ နေ့ဖက်အလင်းရောင်အောက် နဲ့ ကင်မရာ flash ကို ဟန်ချက်ချိန်ညီပေးနိုင်တဲ့အတွက် Street Photography အများစုက X100/S/T တွေနဲ့ရိုက်ကူးရတာ နှစ်သက်ကြပါတယ်။
Leica ရဲ့ စည်းချက်ညီ ဖလက်ရှ်က 1/180s မှာ အသေဖြစ်လို့ နေရောင်ပြင်းပြင်းအောက်မှာ f/8 နဲ့ရောက်ကူးမယ်ဆိုရင် ISO ကို3stops လောက် လျော့ချဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဟိုးရှေးတုန်းက ဖလင်ခေတ်ကလို ကျွန်တော်က ISO 400 နဲ့ ပုံမှန်ဆိုရိုက်ကူးလေးရှိတဲ့အတွက် ISO 50 သို့မဟုတ် အဲလိုမျိုးနည်းတဲ့ ISO တွေနဲ့ ရိုက်မယ်ဆိုရင် နေ့အလင်းရောင်နဲ့ ဟန်ချက်ညီဖို့ ချိန်ညှိခဲ့ရပါတယ်။ လွယ်ကူပေမယ့် အပိုလုပ်ရတာလေးဖြစ်လို့ တခါတလေမှာ နမော်နမဲ့နိုင်မိတဲ့အချိန်တွေမှာ လုပ်ဖို့ မေ့သွားတတ်ပါတယ်။ X100T မှာတော့ ရှပ်တာအမြန်နှုန်းကို ချိန်ညှိပေးခြင်းဖြင့် နောက်ခံက အလင်းရောင်နဲ့ ဟန်ချက်ညီစေလို့ ဆက်တိုက် ရိုက်ကူးသွားယုံပါပဲ။ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော်ကြိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Hybrid Viewfinder က တကယ့်ကို စွဲလန်းစေပါတယ်
X100T မှာ သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးလို့သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ Hybrid Viewfinder ကိုတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ Optical Viewfinder သို့မဟုတ် Electronic Viewfinder အဖြစ် နှစ်မျိုးစလုံးကို ခလုတ်တစ်ခုတည်းအသုံးပြုပြီး ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ Electronic Rangefinder mode ကိုအသုံးပြုပြီး Focus ဖြတ်လို့အဆင်ပြေအောင် သေးငယ်တဲ့ EVF အပေါက်လေးကို ညာဖက် ထောင့်မှာ တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
Leica M 240 ဆိုတာ digital rangefinder ကင်မရာဖြစ်တဲ့အတွက် Optical Viewfinder အသုံးပြုပြီး အသင့်အနေနဲ့ focus လုပ်ရတဲ့အမျိုးအစားပါ။ EVF ကို တပ်ဆင်လို့ရတယ်ဆိုပေမယ့် ဈေးကြီးတဲ့အတွက် Leica ကင်မရာပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ တပ်ဆင်ဖို့ဝန်လေးကြပါတယ်။
Leica ရဲ့ OVF နဲ့ Leica Kool-Aid လို့ တင်စားခေါ်တဲ့ Leica ပစ္စည်းတွေကို ဈေးကြီးကြီးသုံးစွဲရတဲ့အရသာကို နှစ်ပေါင်းအနည်းငယ်ကြာအောင် စွဲလန်းမိခဲ့တာဆိုတာ ကျွန်တော်ဝန်ခံနိုင်ပါတယ်။ OVF ကို အမြဲဖွင့်ထားပြီးနောက်မှာ သင့်အတွက် လှုပ်ရှားနေတဲ့ မြင်ကွင်း ရဲ့ အပြင်ဖက်ကို နည်းနည်းလေးပိုမြင်ရနိုင်တဲ့အတွက် frame ထဲကို မဝင်လာခင် ခန့်မှန်းလို့ရနိုင်ပါတယ်။ သီအိုရီအရဆိုရင်တော့ သင့်အတွက် ၃၅ မမ နဲ့ ရိုက်ကူးနေချိန်မှာ သင့်အတွက် frame ရဲ့ အပြင်ဖက်ကအရာတော်တော်များမာျးကို မမြင်ရနိုင်တဲ့အတွက် OVF သုံးပြီး ပိုကောင်းအောင် ထိန်းချုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ Leica ရဲ့ OVF နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ချိန်တွေကို သိပ်ပြီး အမှတ်မရတော့ပါဘူး။
Leica rangefinder တွေရဲ့ စစ်မှန်တဲ့အမှန်တရားတစ်ခုက focus လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ lens ကိုဖြတ်ပြီး ကြည့်လို့ မမြင်နိုင်ပါဘူး။ ဒီအရာက Leica ရဲ့ သေးငယ်တဲ့ ကင်မရာဘော်ဒီတွေထုတ်လုပ်မှုအပေါ်ကြာရှည်စွာ မီခိုမှုရဲ့ပြန်ပေးဆပ်ရတဲ့ ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ခုအခါမှာတော့ ၂၁ ရာစုရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် EVF တွေကို OVF တွေနေရာမှာ လူအများစုက အထက်ဖော်ပြထားတဲ့အချက်ကြောင့် အလွယ်တကူအစားထိုးလာကြပါတယ်။
ရိုးရိုးသားသားဝန်ခံရရင်တော့ ကျွန်တော် X100T ကို စသုံးရတဲ့အချိန်မှာ OVF သာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်နဲ့အမျှ ကြာလာတဲ့အခါ EVF ကိုအသုံးပြုတာက ပိုကောင်းတဲ့ ပုံတွေရအောင် ကူညီနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အကြံကို တဖြည်းဖြည်း ရလာပြီး OVF နဲ့လည်း အသုံးပြုရတာ တူညီမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုပါ သတိထားမိလာပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ကျွန်တော့အနေနဲ့ X100T ကို EVF စနစ်နဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ သီးသန့်အသုံးပြုလာခဲ့ပါတယ်။ မကောင်းချက်လေးကတော့ EVF ရဲ့ ဘထ္ထရီစားနှုန်းက မြင့်မားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။
Fullframe ကင်မရာကြီးတွေက APS-C တွေထက် ဆင်ဆာပိုင်းမှာ ပိုကောင်းတယ်၊ ပစ်ဇယ်တွေပိုများတယ် စတာတွေ စဉ်းစားဖို့လိုကောင်းလိုပါလိမ့်မယ်။
သို့ပေမယ့်လည်း APS-C ဆင်ဆာတွေအနေနဲ့ သူတို့မှာ သူတို့လမ်းကြောင်း မတူညီတဲ့ ရုပ်ပုံအရည်အသွေးတွေရှိတယ်ဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ကွဲပြားချက်တစ်ခုကတော့ သေးငယ်တဲ့ APS-C လိုမျိုးဆင်ဆာအတွက် ပိုကျယ်တဲ့ မှန်ဘီလူးတွေလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ Fullframe အတွက်မလိုအပ်ပါဘူး။ ထို့အတွက်ကြောင့် APS-C ကင်မရာမှာ 23 mm မှန်ဘီလူးတပ်ဆင်ပြီး full frame ရဲ့ မြင်ကွင်း 35 mm ရအောင် စီမံထားလိုက်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်က ဒီမှာစတင်ပါတယ်။ မြင်ကွင်းကျယ်မှန်ဘီလူးဆိုတာ မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကို ကျယ်အောင်ဖြန့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် မြင်ကွင်းထဲက အရာတွေကို အပြင်မှာရှိတဲ့အကွာဝေးထက် ပိုဝေးတဲ့နေရာကို ပို့လိုက်သလို ထင်ရစေပါတယ်။ 23 mm နဲ့ 35 mm မှန်ဘီလူးတွေကို ယှဉ်တဲ့အခါ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကို ပိုသိသာစေပါတယ်။
ကျွန်တော်က မြင်ကွင်းကျယ်မှန်ဘီလူး ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ခံကျယ်နဲ့အတူ ရုပ်ရှင်ဆန်တဲ့ မြင်ကွင်း၊ ခံစားမှုတွေကို ရှေ့က မြင်ကွင်းတွေပါဝင်လာအောင် ရိုက်ချက်တစ်ခုတည်းမှာ စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Jack Simon (ဂျက်ဆိုင်မွန်) လို့ခေါ်တဲ့ Street Photographer တစ်ယောက်က ဒီ လုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုပြီး သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲကို ရုပ်ရှင်ဆန်တဲ့ခံစားမှု ထည့်သွင်းရိုက်လေ့ရှိပြီး နာမည်ကြီးပါတယ်။
Fuji ရဲ့ အရောင်များနဲ့ X-Trans အမျိုးအစား ဆင်ဆာ
Fuji ရဲ့ X-Trans အမျိုးအစား ဆင်ဆာတွေအကြောင်းကို ဓာတ်ပုံဆရာတွေက အကောင်းဖက်ကရော အဆိုးဖက်ကပါ ပြောနေတာ နှစ်ပေါင်းကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်တော့ ဆင်ဆာပေါ်က အနီ၊အစိမ်းနဲ့အပြာရောင် အခင်းအကျင်းတွေကို အရောင်ရောထွေးမှုနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် Fuji ကဖန်တီးထားလို့ Optical Low Pass filter မလိုအပ်ပါဘူး။ အဲဒီအချက်က ဆင်ဆာရဲ့ ဖော်ပြထားတဲ့ မီဂါပစ်ဇယ်အရေအတွက်ထက် ပိုကောင်းသွားနိုင်စရာ အကြောင်းဖြစ်လာပါတယ်။
X100T က ထွက်လာတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေက စူးရှပြီး 3D အရည်အသွေးနီးပါးဖြစ်လို့ အခြားသော ဒီဂျစ်တယ် ကင်မရာတွေမှာ တွေ့ဖို့ ခက်ခဲတဲ့ ပုံစံပါ။ အထူးသဖြင့် အလင်းများ တဲ့နေရာတွေမှာ အလွန်ပင် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်တဲ့ ဆင်ဆာဖြစ်ပါတယ်။ မှောင်ရိပ်ကျနေတဲ့နေရာတွေ ကို လင်းသွားစေပြီး အလင်းများတဲ့နေရာတွေကို မှောင်သွားစေတာ သမားရိုးကျ ဖလင်ကင်မရာတွေအလုပ်လုပ်တာနဲ့ ဆင်တူတဲ့အပြင် အခြားသော အသုံးဝင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့ Skin tone (အသားရောင်) စတာတွေကို ပလတ်စတစ်နဲ့ အနည်းငယ်တူသွားစေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် X100T ရဲ့ ဆင်ဆာက Leica M 240 ထက် နည်းနည်းလေး ပိုကောင်းသွားတယ်လို့တော့ ရည်ရွယ်ပြောဆိုခြင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ M 240 RAW ဖိုင်တွေကိုအသုံးပြုပြီး Lightroom မှာ ချိန်ညှိလိုက်ရုံနဲ့ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ကျွန်တော်ရရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။
ငွေကြေးကြောင့်ဆိုရင်တော့ ပုံရိပ်အရည်အသွေးအရ X100T ကို ယှဉ်ဖို့မလွယ်တဲ့အတွက် Leica အတွက်မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာပါတယ်။ ြင်းဖို့လဲ မလိုလောက်ပဘဘူး။
X100U သို့မဟုတ် ဘာနာမည်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်
နောက်ထပ်ထွက်လာမယ့် X100T ( အခုအချိန်မှာ X100T ထက်ပိုကောင်းတဲ့ X100F ထွက်နေပါပြီ)
X100 စီးရီးကင်မရာအသစ်ရဲ့ အနာဂတ်ဟာ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းမှာပါ။ မရေရာသေးပေမယ့် ဒီကင်မရာရဲ့ အသုံးဝင်မှုဆိုတာတော့ ပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ထို့အတွက် X100T ကို ဒီအချိန်မှာ (ဈေးကျသွားလို့) ဝယ်ယူဖို့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ ကင်မရာဗားရှင်းအသစ်မှာ ပိုကောင်း ပိုအစွမ်းထက်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေပါဝင်လာမှာ အသေအချာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကင်မရာအသစ်ထွက်လာတောင်မှ X100T ရဲ့ အသုံးဝင်မှုက ပျောက်ပျက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။
X100T ကို လအနည်းငယ်အသုံးပြုပြီးတဲ့အခါ နောင်ထွက်မယ့် ကင်မရာမှာ ဒီအချက်တွေကို မြင်ရရင် ကောင်းမှာပါ။
24MP နဲ့ X-Pro2 ရဲ့ ဆင်ဆာ
Resolution ပိုကောင်းတဲ့ EVF
ဒီအချက်တွေပါလာပေမယ့် X100 စီးရီးရဲ့ နဂိုရည်ရွယ်ချက်လမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲထွက်လာဖို့
ငွေကြေးစိတ်ပူမနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ ကျွန်တော် Leica M 240 ပဲဆက်လက်သုံးစွဲနေလောက်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဒါ တကယ့်လောကပါ၊ သင့်မှာ ကျပ်တည်းလာရင် သင့်အတွက် ကျွန်တော့်အတွက် အရင်ဆုံးစဉ်းစားမိမှာ စားဝတ်နေရေး စတဲ့ အခြားအရာတွေဖြစ်ပြီး နောက်မှာ ဓာတ်ပုံ ဆိုတာ လိုက်လာပါလိမ့်မယ်။ ယနေ့အချိန်မှာ Leica M 240 (35 mm f/2 Summicron lens) အသစ်တစ်လုံးကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၉၉၀ နဲ့ ရောင်းချပါတယ်။ ဒါဟာ ဒေါ်လာ တစ်သောင်း ပါ။ ဒီဈေးနဲ့ဆိုရင် Fuji X100T ၉ လုံးတိတိ ဝယ်လို့ရတဲ့ ပမာဏဖြစ်ပြီး ပိုသေးတဲ့ ငွေနဲ့တောင် ခင်ဗျားရဲ့ ချစ်သူ ခင်သူ တွေကို ညစာအဖြစ်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် X100T တစ်လုံးလောက်သာ ဝယ်ပြီး ကျန်တဲ့ငွေနဲ့ Street Photography ခရီးတစ်ခုတောင် ထွက်လို့ရပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်ရင်တော့ Leica M 240 ဆိုတာ X100T ထက် ကောင်းပေမယ့် အလွန်ကြီး ပိုကောင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်တစ်ချက်က သင့်ကင်မရာပေါ်မှာ အနီရောင်အစက်လေးတစ်စက်လောက် ထင်စေချင်တာနဲ့ ဒီလောက် ငွေပမာဏ ကွာခြားမှုကို စဉ်းစားမလားဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ပါ။ (Leica တံဆိပ်က အနီရောင် အစက်)
Leica နဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေ ကျွန်တော် တခါတလေမှာ ပြန်သတိရကောင်း ရနေပါလိမ့်မယ်။ Leica M 240 ကထွက်လာတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေဆိုတာ တခြားတံဆိပ်က ရိုက်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ ခွဲခြားကြည့်ဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲပါတယ်။ ထို့အတွက် ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ X100T နဲ့ ရိုက်ကူးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး Leica နဲ့သာရိုက်လိုက်ရရင် ဒီဓာတ်ပုံက ပိုကောင်းလာမှာပါ ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး ဘယ်တော့မှ မရခဲ့ပါဘူး။
အခြား Leica တစ်လုံးယူမလားလို့ ကျွန်တော့်ကိုမေးရင် ယူကောင်းယူပါ့လိမ့်မယ် ဒါပေမယ့် X100T နဲ့ ရိုက်ရတာ ပျော်ရွှင်နေတုန်းပါလို့ ဖြေမိမှာပါ။
By Karl Edwards : Sold My Leica And Bought Fuji X100T
May 25, 2016 Jedi 0